Somalia:Wasiirkii arimaha gudaha oo maanta lagu aasay Muqdisho | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > Tacsi, TFG Somalia	> Somalia:Wasiirkii arimaha gudaha oo maanta lagu aasay Muqdisho
Saturday, June 11, 2011 Laaska News
Allaha u naxariistee Wasiirkii Arimaha gudaha iyo Amniga Qaranka oo ku geriyooday Qarax gelinkii danbe ee shalay lagula beegsaday gurigiisa ayaa maanta lagu aasay Qubuuraha Sheekh Suufi ee magaalada Muqdisho.
Ka hor inta aan la aasin Meydka ayaa Salaaddii Janaasada waxaa lagula tukaday Masjidka Shuhadaa ee Madaxtooyada Qaranka, waxaana Salaaddii Janaasada ka qeybgalay Madaxweynaha Soomaaliya, Sheekh Shariif, iyo R/wasaare Farmaajo, xubno ka tirsan labada gole ee Dowladda, iyo dadweyne farabadan, iyadoo Salaaddii Janaasada uu dadka tushiyay Sheekh Maxamuud Sh. Xasan Faarax oo ay walaalo yihiin C/Shakuur Sh. Xasan faarax Wasiirkii arimaha gudaha iyo Amniga Qaranka.
Tukashada Salaadda Janaasada kadib ayaa waxaa halkaasi ka hadlay R/wasaare Maxamed C/llaahi Farmaajo oo sheegay in uu Wasiirku ahaa qof aad u qiimo badan oo wadani ah, uuna shaqadiisa ku qanacsanaa mudadii uu la sheqeynayay, wuxuuna ugu duceeyay in Allaah uu Jannadiisa ka waraabiyo maadama ay gacan ka gardaran dishay.
Wasiirka Arimaha dibadda Maxamed C/llaahi Oomaar oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in Wasiirka geeriyooday uu ahaa nin firfircoon oo si daacad ah howlihiisa u gudan jiray, wuxuuna u rajeeyay in Allaah uu naxariistiisa ka waraabiyo.
“waxyaabaha lagu yaqaanay wasiirka waxaa ka mid ahaa in halku dhig ay u ahaan jirtay, Intaan Daalim ahaan lahaa aan Madluum noqdo, waxaana uu ahaa nin Masjidka dadka uga horeeya ugana danbeeyo, Allaha u naxariistee waxa uu ahaa shaqsi ilaa yaraantiisii ku soo barbaaray cibaadada Alle”ayuu yiri Sheekh Maxamuud Sh. Xasan faarax oo ay walaalo yihiin Wasiirka geeriyooday.
Intaasi kadib ayaa Meydka Wasiirka Waxaa lagu aasay Qubuuraha Sheekh Suufi, iyadoo aaska Marxuumkana ay ka qeybgaleen Mas’uuliyiin iyo Shacab aad u farabadan.
Somalia:Aas heer Qaran ah oo loo sameeyay Wasiirkii arrimaha gudaha(Sawirro) Libya:Gaddaffi ready for talks